Nkọwapụta --lọ ọrụ - Linyi Guoshengli Nkwakọ ngwaahịa Co., Ltd.
Pụrụ iche na ngwaahia Mgbanwe Packaging ihe karịrị afọ 20
Linyi Guoshengli Packaging Ihe Co., Ltd. bụ enyemaka ụlọ ọrụ nke Linyi Guosheng Agba Printing na mbukota Co., Ltd nke e hiwere na 1999 na mmalite. Anyị bụ ndị a elu-edu ahaziri mgbanwe nkwakọ soplaya, pụrụ iche na rollstock film na preformed pouches n'ichepụta ihe karịrị afọ 20. Dị ka a Premiya mgbanwe ebi akwụkwọ na n'ịtụgharị ụlọ ọrụ, anyị na-enye nkwakọ ngwọta na 10-agba usoro ebi akwụkwọ na a dịgasị iche iche nke ihe nkiri gauges na widths. Site imewe ka n'ịtụgharị, anyị na-agba mbọ na-enye onye-nkwụsị ọrụ na-anabata na ọkachamara nkwurịta okwu.
Ngwaahịa dị elu sitere na ụlọ ọrụ dị elu. Anyị na-etinye igwe na-akpaghị aka na usoro nrụpụta zuru ezu iji mepụta ma bipụta ọtụtụ ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa na-agbanwe agbanwe. Kemgbe ọtụtụ afọ, anyị enwetawo aha na ụlọ ọrụ maka imepụta nkwakọ ngwaahịa na-agbanwe agbanwe nke na-arụ ntụkwasị obi na mgbe niile.
Guoshengli Packaging bụ ọrụ ọrụ nkwakọ ngwaahịa gị zuru oke. Ebumnuche anyị bụ imepụta azịza nke ahịa na ahịa nke dabeere na ndị ahịa iji bulie akara gị ma nyere aka ka ika gị sie ike. Kwesịrị ịnwe ajụjụ ọ bụla ma ọ bụ chọọ enyemaka na ịchọta ngwugwu zuru oke maka ngwaahịa gị, biko nweere onwe gị ịkpọtụrụ anyị ma anyị ga-enwe obi ụtọ inyere gị aka.
Ikpokọta ikike Guoshengli iji weta echiche gi na ndu
10-Agba High Speed ​​Rotogravure Printing Machines
Anyị nwere igwe obibi akwụkwọ 6 kpam kpam. Oke obosara kachasị bu 1300mm. Digital, akpaka, nnukwu ọsọ, ruru eru maka ụdị mbipụta niile.
Automatic High Speed ​​Laminating Machine
Ogologo laminating ya dị nro bụ 1300 mm, nke kwesịrị ekwesị maka ụdị mkpụrụ osisi ọ bụla ma nwee ike mepụta ụdị dị iche iche dị mma nke mejupụtara, dịka ihe nkiri nke nguzogide ọkụ, nkwụsi ike mmanụ, nnukwu mgbochi na nguzogide kemịkal.
Akwa-agba Slitting Machine
Ogologo kachasị dị mkpụmkpụ bụ 1300 mm na nke kachasị dị mkpụmkpụ 50 mm, usoro ịchacha na-egbutu ihe a kpokọtara nke nnukwu obosara n'ime obere akụkụ nke obosara achọrọ dịka mkpa ahụ.
49 etsdị Advanced Machines Machines
Anyị nwere mkpokọta 49 nke igwe ntụgharị, na-emepụta ụdị akpa na akpa dị iche iche na ihe dị iche iche dịka mpempe akwụkwọ aluminom, plastik, akwụkwọ kraft, wdg, na-ekwenye oge na-eduga ngwa ngwa.
Nnyocha Ngwá Ọrụ
Anyị ụlọ ọrụ na-kwadebere na kasị zuru ezu ule ngwaọrụ na nke a ụlọ ọrụ, na ike na enterprise nọọrọ onwe ha ụlọ nyocha, nke na-enye ike ọgụgụ isi nkwado na ngwaike nkwa maka elu àgwà ngwaahịa mmepe.
ITO Waste Gas Ọgwụ akụrụngwa
Anyị na-etinye uche dị ukwuu na nchedo gburugburu ebe obibi, ma na-ebubata ITO n'efu gas mgbake na akụrụngwa ọgwụgwọ sitere na Spain.